#Coronavirus: Sebewu-554 abaphethwe yiCorona kuleli
UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuleli uMnuz Zweli Mkhize usememezele ukuthi sesinyukele ku-554 isibalo sabahaqwe yiCorona kuleli. Isithombe esigcinwe: Brendan Magaar/African News Agency (ANA)
MCEBO MPUNGOSE | March 24, 2020
UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuleli uMnuz Zweli Mkhize usememezele ukuthi sesinyukele ku-554 isibalo sabahaqwe yiCorona. UMkhize uveze lokhu ekhuluma nabezindaba namhlanje ekuseni ngezinhlelo zikahulumeni kulandela isimemezelo sikaMengameli Cyril Ramaphosa izolo othe lizovalwa izinsuku eziwu-21 izwe kusukela ngoLwesine kuya ku-Ephreli 16 ukunqanda ukubhebhetheka kweCorona.
UMkhize uthe kwabathelelekile, ababili basesimeni esibucayi kanti sebelaliswe emagunjini abagula kakhulu ezibhedlela abakuzo ezizimele. Uqhube waveza ukuthi abahlanu abebethelelekile sebeyaphila futhi sebededeliwe ezibhedlela. Unxuse abantu okungenzeka ukuthi bathintene nabantu abaneCorona ukuthi bayohlolwa.
"Siyacela abantu ukuthi basivumele ukuthi sibahlole balandele nemigomo esibabekela yona. Sicela nisivumele sinivikele, sidinga ukuthi nizibophezele kulokhu. Uma kukhona abanqabayo sizosebenzisa umthetho," kusho uMkhize.
UMkhize ucele bonke abantu ababehambele isonto lasesifundazweni iFree State elavakashelwa abavakashi baseTexas e-US ukuthi bayohlolwa. Kutholwe ukuthi lezi zifakashi ezinhlanu zineCorona kanti ibandla ezalivakashela lalihanjelwe abantu abawu-200.
Uthe balindele ukuthi isibalo sabathelelekayo siqhubeke sinyuke emasontweni amabili ezayo kodwa singanqandeka uma abantu bezobambisana nohulumeni.
"Njengoba sekusondele isikhathi somkhuhlane nje, siyanxusa abantu ukuthi basheshe bawugomele ukuze izibhedlela zingagqilazeki kakhulu njengoba sisabhekene naleli gciwane," usho kanje.
Khonamanjalo, isibalo sabaphethwe yilesi sifo emhlabeni sesingaphezulu kuka-380 000 kanti sesidlule nababalelwa ku-16 585.